UNGAZILIBALA NJANI IINWELE: NGABA UZENZELE IINWELE ZAKHO NGEECLIPPERS (2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ungazilibala njani iinwele: Yenza iinwele zakho ziFade ngeeClippers
Ukuphela yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda kwaye iyaqhubeka nokuba yeyona ndlela yokusika iinwele zakho emacaleni nasemva kwentloko. Inwele efipheleyo kukucheba okwangoku okudibanisa iinwele zakho ukusuka phezulu kuye ezantsi. Esi sitayile sicociweyo sinikezela ngenkangeleko entsha, ecocekileyo esebenza kakuhle nazo zonke iinwele ezipholileyo kumadoda. Ngelixa uninzi lwabantu luye lwaphela iinwele kwivenkile yokucheba iinwele, kukho iindlela onokuthi uziphelise ngokwakho ekhaya. Ukusika ukuphela kufuna iinwele ezisikiweyo ezisemgangathweni kunye noonogada abaninzi ukukunceda ukudibanisa kunye nokufaka iinwele. Kwabaqalayo, kubalulekile ukuba ulandele amanyathelo kunye nemiyalelo yamanyathelo ukunika iinwele ezilula zokuphelisa iinwele.
Nokuba uzinika ukuphela okanye ukufiphala kweenwele zomnye umntu, jonga esi sikhokelo sendlela yokwenza iinwele ezingapheliyo. Ngendlela ethile yokuziqhelanisa, uya kuba nakho ukusika i-low, mid, high, skin, bald or taper fade haircut nguwe wedwa ekhaya ngaphandle kwexesha.
MbiniUyenza njani iFade ngeClippers
3Ungayisika njani iFade yokucheba iinwele
4Ungazilibala njani iinwele zakho
4.1Gqiba umgca wakho wokuphela
4.2Khetha ubude kunye noKhuseleko lweMigca yokuPhela
4.3Qalisa Ukuphela Amacala
4.4Utshintsho phakathi kwabalindi Ukuphelisa iinwele zakho
4.5Sebenzisa iNdlela yakho kwiNwele eziPhezulu
4.6Nciphisa iNeckline kunye neenwele
4.7Ukuphonononga iinwele zakho
Ukucheba iinwele kudibanisa iinwele emacaleni nasemva kwentloko kwizinwele ezinde ezingaphezulu. Kukho ezahlukileyo iintlobo zokucheba iinwele , kwaye uhlobo olukhethileyo luxhomekeke kwizinwele zakho kunye nesitayile. I-taper fade yakho ingaqala phezulu , phakathi okanye isezantsi kwaye unqunyulwe eluswini okanye mfutshane kakhulu. Uzibulala njani iinwele zakho kuya kugqiba ukuba uyayifumana taper , ulusu , kungekudala , ukuhla , temp , okanye fiphela ngaphantsi iinwele.
amadoda amnyama acheba iinwele
Ubufutshane beenwele zakho kunye nendawo emgceni wakho ophelayo utshintsha usuka kwenye indoda uye kolandelayo, njengoko wonke umntu enoluvo lwakhe lokuba yintoni ebonakala intle. Nokuba ukhetha ntoni, ukuphela kuyindlela elungileyo yokwenza ukubonakala okutsha, kwendoda kwaye kuyamcenga lonke uhlobo lweenwele. Ngokufiphala, iinwele ezivela ezindlebeni zakho ziye kwi-neckline yakho zifinyeziwe ukuze ube nokugqiba okucocekileyo kwintamo yakho nayo.
Ukufumana ukuphela komchebi weengcali kukhethwa, nangona le nwele inokulinga ekhaya ngeengcebiso ezimbalwa eziluncedo. Ngokubanzi, umchebi uya kuba nombono ongcono wendlela yokudibanisa iinwele ngokulinganayo entlokweni yakho. Abachebi abanelayisensi bafumana uqeqesho olubanzi kwaye bayazi kakuhle le ndlela kule minyaka idlulileyo.
Ukuba ufuna ukuzama isandla sakho ukusika ukuphela kwakho, lungiselela kwangaphambili kwaye uzinike ixesha elaneleyo lokulungisa umba ukuba wenza iimpazamo. Ngokufanelekileyo, uya kufuna ukusika ukuphela ngee-clippers ukuba usaqala. Ngenxa yokuba iinwele ze-DIY zinokuba ngumceli mngeni, iseti yokuchofoza ekhaya iya kukubonelela ngomatshini kunye noonogada bokukhokela ukunciphisa kwakho.
Uyenza njani iFade ngeClippers
Uzakufuna ii-clippers ezilungileyo ukuba ufuna ukuphelisa iinwele zakho. Thenga iseti epheleleyo yoonogada beziqhoboshi zakho, njengoko uzakufuna iindlela ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukuba udibanisa iinwele zakho ngokufanelekileyo.
Ukongeza kwezi ziqhotyoshelweyo, thenga isiskere sobuchule, ikama, isicheme kunye nesipili esiphathwayo. Nganye yezi zinto iyafuneka kuyo yonke inkqubo yokubuna ukukunceda ukuba ufezekise ukusikwa.
Kumadoda afuna ukulungiselelwa kangangoko, ii-clippers zokuphela kunye neziqhotyoshelweyo ziyafumaneka ukuze zithengwe. Ukutyala imali kwezi clippers ngumbono olungileyo ukuba unenjongo yokwenza into ebuthathaka kwikamva elibonakalayo.
Iifipper clippers kunye nezixhobo zokuseta ezisetyenziswa ngabachebi zibukhali kuneziklipa zemveli kwaye zibonelela ngamandla kunye nozinzo. Kwaye ezi klippers ziza neseti yazo yoonogada kunye neekama ekuvumela ukuba uthenge yonke into oyifunayo ngaxeshanye.
Ukuba awukwazi ukuhlawula izixhobo zokucheba iinwele, iseti elula yeeklipa kunye noonogada abathembekileyo zinokuvelisa iziphumo ezinesitayile. Izihlangu ziyafumaneka kunye okanye ngaphandle kwentambo, kwaye uhlobo olukhethileyo lusekwe kwinto okhululekile ukuyisebenzisa. Amanye amadoda akhetha inkululeko yeziqwengana ezingenantambo, ngelixa ezinye zingafakwanga ngentambo.
Ungayisika njani iFade yokucheba iinwele
Ukusika i-fade haircut yinkqubo yenyathelo ngenyathelo. Thatha ixesha elifunekayo lokugqibezela inyathelo ngalinye ngaphambi kokudlulela kwinqanaba elilandelayo.
Ukuqala, khetha isikhundla somgca wakho wokuphela. Ukuthatha isigqibo sokuba uza kuwubeka phi umgca wakho wokuphela usekwe ngokupheleleyo kukhetho, njengoko amanye amadoda ethanda ukuyibeka ezantsi kwaye abanye bakhetha ukuhlala phezulu entloko.
Emva koko, misela ukuba ufuna ixesha elide okanye elifutshane kangakanani. Ubude obukhethileyo buchaza ukuba yeyiphi na into oyigcinele iziqhoboshi zakho. Emva kokumisela ubude obufunayo kunye nokukhetha iziqhoboshi ezifanelekileyo, inkqubo yokucheba iyaqala.
Ngalo lonke ixesha qala emazantsi onwele lwakho kwaye usebenze phezulu ngokufutshane, kwanemivumbo. Uya kusebenzisa le nkqubo inye emacaleni nasemva kwentloko yakho. Xa ukulungele ukuphela kubude obahlukileyo, tshintshela kunogada ofanelekileyo. Hlanganisa ubude ngokulinganayo ukwenza utshintsho lwendalo kwizinwele zakho.
Ukudibanisa amacala kunye nokubuyela kwizinwele ezinde ngaphezulu kwentloko yakho, kuyakufuneka usebenzise enye yeekomi ozithengileyo.
Hlanganisa iinwele zakho ngqo ukusuka entlokweni yakho kwaye ushiye isixa esifutshane sivelisiwe phezu kwamazinyo ekama ukuze usike kunye neziqhiki. Ukuba ufuna iinwele zakho zihlale ixesha elide, uya kunciphisa kuphela isahlulo esincinci ngeli nqanaba.
Nje ukuba wenze oku, sebenzisa iseti yokucheba ukucoca intamo yakho kunye neenwele. Oku kukunika ukugqitywa okuhle kwaye ugqibezele ukuphela. Khumbula kuyo yonke le nkqubo ukuqala ngobude obude kancinci ukuvumela naziphi na iimpazamo ozenzayo.
Unako ukuhlala ucheba iinwele zakho xa sele ugqityiwe ukuphela kanye, kodwa kuya kuthatha iiveki ezimbalwa ukuba iinwele zakho zikhule kwakhona ukuba unqumle kakhulu ngengozi.
Ungazilibala njani iinwele zakho
Gqiba umgca wakho wokuphela
Iinwele ezisezantsi, eziphakathi kunye neziphezulu eziphelileyo zezona ziqhelekileyo. Kuxhomekeka ekubeni ukhetha yiphi, oku kugqiba ukuba umgca wakho wokuphela uqala phi. Iinwele ezingezantsi komgca wokuphela ziya kucocwa kubunqamle obunqwenelekayo okanye ezantsi kulusu ngokubhekisele kukhetho olukhethileyo.
Ukuba awufuni ukunciphisa iinwele zakho eluswini ngenxa yempandla, qala ngokudibanisa ubude obahlukeneyo ngentla kwendlebe yakho. Yiya phezulu ukusuka kule ndawo ukuya kwizinwele ozishiya phezulu ngelixa ukhumbula ubude bakho obufunayo.
Khetha ubude kunye noKhuseleko lweMigca yokuPhela
Nje ukuba ubeke umgca wakho wokuphela, khetha ubude obufanelekileyo kunye nobungakanani obugcinayo bokugada kwiziklufu zakho. Inkqubo ye- ubungakanani konogada ibonisa ubude beenwele zakho okanye obufutshane.
Amanani asezantsi abonisa iinwele ezimfutshane ngelixa amanani aphezulu abonisa iinwele ezinde. Nokuba ungazikhetha kubude obukhethiweyo, soloko uqala ngenombolo yesi-3 okanye e-4.
Ngokukhetha omnye waba nogada ukuba aqale, uyazivumela ukuba unqamle ukusebenzisa ii-clippers kunye nokusika ngaphandle kwempazamo yokubhabha iinwele zakho zimfutshane kakhulu.
Ngokucheba iinwele, qala ezantsi kwentloko yakho kwaye usebenze phezulu ngelixa usebenzisa ikama yokulinda ukunceda ukuyalela ubude.
Qalisa Ukuphela Amacala
Emva kokukhetha unogada ofanelekileyo, cheba phezulu ukusuka ezantsi kwentloko yakho ukuze ubethe umva kunye namacala entloko. Sebenza kumgca wakho wokuphela ngokufutshane, kwanemivimbo yokwenza i-taper edibeneyo. Khumbula ukuqhubeka uhambisa ii-clippers ngokunyusa phezulu ngelixa ucofa kumgca wakho wokuphela.
Utshintsho phakathi kwabalindi Ukuphelisa iinwele zakho
Ukufezekisa ukuphela okupheleleyo, utshintsho phakathi koonogada njengoko usenza indlela yakho inyuka isuka ezantsi kwentloko yakho. Njengoko usondela kubude ngaphezulu kwentloko yakho, tshintshela kubungakanani bokugcina obuvumela ukuba unciphise ixesha elide.
Nje ukuba uyeke ukutshintshela isincamathiselo somlindi, khumbula apho wenze khona imivumbo yokugqibela. Kulapho uzakuqala khona xa sele ubeke ikama ukuqinisekisa ukuba uboya iinwele zakho ngokulinganayo.
Ukuba iinwele zakho ziyagqagqana kwiindawo ezithile, ungakhathazeki. Le yinxalenye yendalo yenkqubo yokuxuba xa uyizama okokuqala kwaye uya kushiyeka ujongeke ngombala oqinisekileyo ukuba uyawuthanda.
Sebenzisa iNdlela yakho kwiNwele eziPhezulu
Inxalenye ephambili yokwazi kakuhle ukuphela kwayo kukudibanisa umthungo ochetyiweyo kunye namacala entloko kwizinwele ezinde ezingaphezulu. Ukwenza njalo, bamba ikama yakho kwaye uyiqhube ngeenwele zakho de isixa esikhethiweyo sishiyeke ngaphezulu kwamazinyo ekama.
Emva koko, thatha isilungisi sakho kwaye usisebenzise ngaphezulu kweenwele eziveziweyo. Oku kunciphisa ubude bakho obufunayo ngomzamo omncinci kwaye kukunika ulawulo kwimveliso egqityiweyo.
Nciphisa iNeckline kunye neenwele
Emva kokuba i-fade yakho yenziwe, sebenzisa i-trimmers yakho ukuze ucoce i-neckline yakho kunye neenwele. Sebenzisa i-trimmer ukunceda ukubumba intamo yakho ngaphambi kokucheba iinwele kubude obufunayo ngezantsi komgca wakho ophelileyo.
Ukuba unentshebe yokucheba kuphela, sebenzisa oko ukugqibezela eli nyathelo. Oku kusebenza kakuhle xa isilevu sakho sokucheba singasetyenziselwa ukusika okucocekileyo okusondeleyo. Kumadoda afuna umgca wokugqiba ukucheba iinwele, sebenzisa i-outliner okanye i-edger ukwenza ukusika okubukhali okufunekayo.
Ukuphonononga iinwele zakho
Nje ukuba ugqibezele ukuphela kwakho, uchebe iinwele ngaphezulu, kwaye ucime amacala kunye nomva, lixesha lovavanyo olusondeleyo. Jonga iinwele zakho ngesipili esiphathwayo ukuze ubone ukuba uphose nawaphi na amacandelo.
Khawukhumbule ukukwenza lula kuwe ukuba wenze iimpazamo ezincinci kuba le yinxalenye yendalo yenkqubo yokufunda.
Ukuba uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungazinika ukuphela, thatha ixesha lokufunda ngeendlela ezahlukileyo zokucheba iinwele zamadoda ukuze ubone ukuba zeziphi ezona ntlobo zichukumisayo zohlobo lweenwele zakho. Qala ngeenwele ezinde ukuze uzinike amandla okwenza ubuchule. Hambisa kwi-fade kancinci ngelixa usenza imivumbo njengoko oku kunceda ukudibanisa iinwele ngokufanelekileyo.
Nabani na owenza impazamo, oku kungalungiswa ngokundwendwela i-barber yakho kwaye ubacele ukuba bacoce iindawo oziphosileyo ekhaya.
indlela yokucima iinwele
izimvo tattoo amadoda ingalo